Faah-faahin: Sidee ku yimid isku dhacii Mahad Salaad iyo Cabdishakuur Cali Mire? - Caasimada Online
Home Warar Faah-faahin: Sidee ku yimid isku dhacii Mahad Salaad iyo Cabdishakuur Cali Mire?
Faah-faahin: Sidee ku yimid isku dhacii Mahad Salaad iyo Cabdishakuur Cali Mire?
Muqdisho (Caasimada Online) – Kulankii shalay ee xildhibaanada Aqalka Sare iyo Golaha Shacabka ay ku yeesheen xarunta Villa Hargeysa ayaa waxaa ka dhacay buuq lagu sigtay inay gacanta iskula tagaan qaar ka mid ah xildhibaanada cusub.
Xildhibaannada ayaa si aqlabiyad leh ku ansixiyay habraaca doorashada guddoonka baarlamaanka, kadibna waxaa la maqlay jug culus oo ahayd hoobiyeyaal lagu weerarray xarunta baarlamaanka ee Villa Hargeysa.
Ugu yaraan 7 ruux oo u badan askarta goobta ku sugnayd ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen weerarka.
Inta uu socday buuqa ayaa waxaa guddoonka baarlamaanka u tagay xildhibaan Cabdullahi Aadan Kulane (Kulane Jiis) oo laga soo doortay Galmudug, gaar ahaan degmada Balanbale.
Kulane ayaa u muuqday mid diidan mudada uu soo bandhigay guddiga baarlamaanka u qaabilsan doorashada guddoonka, oo loo asteeyay in mida aqalka sare ay dhacdo 26-ka April, maalinta xigtana la doorto guddoonka golaha shacabka.
Intii uu xildhibaan Cabdullahi Kulane la hadlayay guddoonka KMG ah ayaa waxaa sii garab istaagay oo ay hadal isla dhaafeen xildhibaan Mahad Maxamed Salaad.
Waxaa la arkayay xildhibaan Cabdullahi Kulane oo ku xanaaqay Mahad, islamarkaana ay labada mudane ku sigteen inay isu gacan qaadaan.
Waxyar kadib waxaa dhinaca kale ee baarlamaanka ka soo kacay xildhibaan Cabdishakur Cali Mire oo si toos ah u abaaray Mahad Salaad. Lama maqli karin hadallada dhexmaray labada mudane, balse xaalkoodu waxa uu gaaray in la kala qabto.
Mahad iyo Cabdishakur oo muddo siyaasadda Soomaaliya ku wada jiray, islamarkaana ay deegaan doorashadoodu tahay Galmudug ayaan si rasmi ah uga hadal waxa ay isku hayeen.
Waxaa xusid mudan in labadan xildhibaan oo ka wada tirsanaa baarlamaankii kan ka horreeyay ay kala taabacsan yihiin Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo mucaaradkiisa.
Mahad Salad oo kulanka kadib qoraal soo dhigay bartiisa Facebook ayaa sheegay in qorshaha xildhibaannada ka aragti duwan uu ahaa “isbaaro ay u dhigtaan doorashada guddoonka baarlamaanka”.
Kulankii shalay ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa laga dheehan karay kala qeybsanaanta sanadihii la soo dhaafay haraysay siyaasadda dalka.